Kushanda Tafura - MimoWork
Matafura ekushanda ari modular akagadzirirwa kuti muchina wako uve anoshanda uye ane simba laser 'Transformers'.
Shuttle Tafura yeLaser Kucheka Machina
Maitiro ekurodha uye kuburitsa zvinhu kubva kune laser yekucheka tafura inogona kuve isingashande basa.
Kupihwa tafura imwe yekucheka, muchina unofanirwa kusvika pakumira zvachose kusvika maitiro aya apera.Munguva ino isina basa, uri kutambisa nguva yakawanda nemari.Kuti ugadzirise dambudziko iri uye uwedzere kubereka kwese, ungangoda tafura yekuvhara kuti ikurumidze kuita.
MimoWork inosvitsa tafura yekupfuura-nekuvhara iyo inofambisa kurodha uye kuburitsa zvinhu izvo zvinogona kuderedza kana kubvisa nguva yekudzikira.Isu takagadzira hukuru hwakasiyana kuti huenderane saizi imwe neimwe yeMimoWork laser michina.
Inokodzera kuchinjika uye yakasimba sheet zvinhu
Zvakanakira zvekupfuura-kuburikidza neshuttle matafura Kuipa kwepas-through shuttle tables
Yese nzvimbo dzebasa dzakagadziriswa pahurefu hwakafanana, saka hapana kugadzirisa kunodiwa muZ-axis Wedzera kune tsoka yeiyo yakazara laser system nekuda kweimwe nzvimbo inodiwa pamativi ese emuchina
Chimiro chakagadzikana, chakasimba uye chakavimbika, zvikanganiso zvishoma pane mamwe matafura evhavha
Kubudirira kwakafanana nemutengo unokwanisika
Chokufambisa chakadzikama uye chisina kuzunguzika
Kurodha uye kugadzirisa zvinogona kuitwa panguva imwe chete
Conveyor Tafura yeLaser Kucheka Machina
Tafura yakagadzirwadandemutande resimbi isina tsvinaiyo yakakodzerazvinhu zvitete uye zvinochinjika.Ne conveyor system, kusingaperi kugadzirisa kuri kuita kuitika.Kushanda kweMimoWork laser system kunogona kuwedzera kuwedzera.
• Hapana kutambanudza jira
• Otomatiki mupendero kudzora
• Customized saizi kusangana zvose zvinodiwa, tsigira huru format
Benefits yeConveyor Table System:
• Kuderedza mari
• Kubudirira kwepamusoro
Kugadzirwa kwevanhu kunogumira, saka kuunza tafura yekutakurisa pachinzvimbo ndicho chinhanho chinotevera chako mukuwedzera mavhoriyamu ekugadzira.MimoWork conveyor tafura inogonesa iwe kurodha uye kurodha paunenge uchicheka.
• Kururama uye kudzokorora
Sezvo chinhu chikuru chekutadza pakugadzira chiriwo chinhu chemunhu - kutsiva basa remanyorero nechaiyo, yakarongwa otomatiki muchina waizopa mamwe mhedzisiro.MimoWork conveyor tafura.
• Kuwedzera kuchengeteka
Kuti ugadzire nzvimbo yekushanda yakachengeteka, tafura yekutakura inowedzera nzvimbo chaiyo yekushanda kunze kwayo iyo yekutarisa kana yekutarisa yakachengeteka zvachose.
Huchi Muzinga Tafura nokuti Laser Kucheka Machines
Tafura yekushanda inotumidzwa zita rechimiro chayo chakafanana nekamuzinga.Yakagadzirirwa kuti ienderane nesaizi yese yeMimoWork laser yekucheka michina.
Iyo aluminium foil inobvumira laser beam kuti ipfuure zvakachena kuburikidza nezvinhu zvauri kugadzirisa uye inoderedza kuratidzwa kwepasi kubva pakupisa kuseri kwechinhu uye zvakare inodzivirira zvakanyanya musoro welaser kubva mukukuvadzwa.
Chimiro chehuchi chinobvumira kufefetedza kuri nyore kwekupisa, guruva, uye utsi panguva yekucheka laser.
• Inokodzera maapplication anoda kushoma kumashure kutarisisa uye optimum flatness
• Yakasimba, yakatsiga, uye yakasimba, inokwanisa kutsigirwa nezvinhu zvinorema
• Muviri wesimbi wepamusoro unokubatsira kugadzirisa zvinhu zvako nemagineti
Banga Strip Tafura yeLaser Kucheka Machina
Knife strip tafura, inonziwo aluminium slat yekucheka tafura yakagadzirirwa kutsigira zvinhu uye kuchengetedza nzvimbo yakati sandara.Iyi tafura yekucheka yakanakira kucheka zvakakora zvinhu (8 mm ukobvu) uye kune zvikamu zvakafara kupfuura 100 mm.
Izvo zvakanyanya zvekucheka kuburikidza zvakakora zvinhu kwaungade kudzivirira laser bounce kumashure.Mabhawa akamira anobvumirawo kuyerera kwakanakisa kwemhepo paunenge uchicheka.Lamellas inogona kuiswa yega yega, nekudaro, tafura inogona kugadziridzwa zvinoenderana nemunhu wega application.
• Kugadziriswa kwakajeka, kushandiswa kwakasiyana-siyana, kushanda kuri nyore
• Inokodzera Laser akacheka substrates akafanana acrylic, huni, epurasitiki, uye zvimwe yakasimba zvinhu
Zvimwe Mainstream Kushanda Tafura yeLaser Kucheka Machina
Itafura yevacuum inogadzirisa zvinhu zvakasiyana-siyana kune tafura yekushanda uchishandisa vacuum chiedza.Izvi zvinova nechokwadi chekutarisa kwakaringana pamusoro pese pese uye semhedzisiro zvirinani zvekuchera mhedzisiro inovimbiswa.Mukuwedzera, inoderedza kushanda kwekubata kwakabatana ne mechanical mounting.
Iyo vacuum tafura ndiyo tafura yekurudyi yezvinhu zvitete uye zvisingaremi, senge bepa, mafoiri, uye mafirimu asingawanzo gara pasi pasi.
Iyo ferromagnetic yekuvaka inobvumira kukwira zvitete zvinhu zvakaita sebepa, mafirimu kana mafoiri ane magineti kuti ive nechokwadi chakaenzana uye chakati sandara.Kunyangwe kushanda kwakakosha kuti uwane mhedzisiro yakakwana yelaser engraving uye yekumaka maapplication.
Acrylic Kucheka Grid Tafura
Iyo yakakosha acrylic grid inodzivirira kumashure kufungisisa.Naizvozvo yakanakira kucheka ma acrylics, laminates, kana epurasitiki mafirimu ane zvikamu zvidiki pane 100 mm, sezvo izvi zvinoramba zviri munzvimbo yakati sandara mushure mekucheka.
Acrylic Slat Kucheka Tafura
Tafura yekucheka ine acrylic lamellas inodzivirira kufungisisa panguva yekucheka.Tafura iyi inonyanya kushandiswa kucheka zvinhu zvakakora (8 mm ukobvu) uye nezvikamu zvakafara kupfuura 100 mm.Nhamba yekutsigira pfungwa inogona kuderedzwa nekubvisa mamwe e lamellas ega, zvichienderana nebasa.
Kutsvaga Online Laser Instruction?
©Copyright 20102021 : Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.>